I-ForexMT4Systems - Landa iikhompyutheni ze-Forex zamahhala kunye ne-MT4 Indicators
Khuphela iikhompyutheni ze-Forex zamahhala kunye neMpawu ze-MT4
Iinkqubo zoRhwebo lweeNkcazo
Iibhonki zeBollinger Izicwangciso ze-Forex
Amakhandlela Amanqwanqwa angaphambili
Iipati zeTrash Iikhokhthi zeeNkcazo
Amaphulo okuPhumela kweXeshana
Amanqwanqwa okuHlalwa kweeNgqungquthela
Isicwangciso sePivot Point Forex Strategies
Isicwangciso seRenko Chart Forex
Inkxaso kunye noKhatyathwa kweSicwangciso seNkcazo
UkuShishino lokuThengisa iZingxube ze-Forex
Umtsalane olandela izicwangciso ze-Forex
Ukutshatyalaliswa kweengqungquthela zesicwangciso se-Forex
I-Forex I-MT4 Systems iyakwamkela kwi-2018!
Iyiphi iSicwangciso seShishini sokuThengisa?
A cwangciso lo shishino yinkqubo esetyenziswe ngumthengisi wangaphambili ukuze anqume ukuba uthenge okanye athengise ididi yemali kunoma yiphi na ixesha. Isicwangciso soshishino lwe-Forex sinokusekelwe kuhlalutyo lobugcisa, uhlalutyo lwetshathi okanye imigaqo-siseko, iziganeko ezisekelwe kwiindaba. Isicwangciso soshishino lokurhweba lwemali sisoloko senziwe ngamagqabantshintshi athengisa ukuba athenge okanye athengise izigqibo. Oku kuthetha ukuba zinokwenziwa ngumthengisi okanye umthengisi, ngenkokhelo ethile. Isicwangciso se-forex singena kwifom yekhompyutha okanye inkqubo yokurhweba.
Isicwangciso-ntengiso esichazayo siza kubandakanya umthengisi onomgaqo osele usemthethweni okanye imeko efunekayo ukuba ayilandele ngokusekelwe kwipatheni / umqondiso wenkcazelo, ngelixa ehleli phambi kwikhomputha yakhe ukulinda iipatheni ezinjalo ukuphuhlisa. Abathengisi abaninzi basebenzisa izalathisi ukuphuhlisa iinkqubo zabo zobuncinane. Umthengisi kufuneka ukuba acacise kwipateni ngokutolika nokuba kuthengwa okanye kuthengisa. Isicwangciso esizenzekelayo Isicwangciso esizenzekelayo, ngakolunye uhlangothi, yi-algorithm eneemigaqo okanye iimeko ezibekiwe, eziye zakhiwe zibe yi software, eyaziwa ngokuba i-robot iphambili (EA). Iinkqubo ezininzi ezenzelwe i-automated system zenzelwe i-Metatrader 4 (MT4). Oku kungakhanjiswa kwiitshathi zakho, ngaloo ndlela zithengela egameni lakho - zinamandla ngokwaneleyo ukuqala ukuthenga okanye ukuthengisa imiyalelo yomthengisi. Kwiimeko ezininzi, ukuthengiswa ngokuzenzekelayo kuthiwa kususwe kwicala lomntu weengqondo ezithintela ukurhweba ngokugqithiseleyo kubahwebi abaninzi.
Amanqanaba okuShishino lweeNkcazo zamahhala
Xa ukhetha uhlobo oluthile lweqhinga lokuthengisa ngaphambili, unokukhetha ezimbini:
Ungasebenzisa naziphi na izicwangciso ze-Forex zokurhweba kule ndawo kwaye uzivavanye.
Inkathazo ngokuhlawula iinkqubo ze-Forex zorhwebo kukuba:
Unokuchitha imali eninzi ekuthengeni isicwangciso se-Forex yokurhweba esingafanelanga isimboli sakho sokuthengisa.
Kamva uhla umgca uqaphela ukuba awufanelanga ubuntu bakho bokuthengisa ngoko awuyi kuwusebenzisa xa uthakazelelo lwakho lokuqala luqala ukugqoka. Inkunkuma yemali.
Ngamaqhinga okurhweba kwi-Forex:
Unenketho yokubavavanya ngaphandle kokuhlawula kwaye ekugqibeleni ufumane inkqubo yokurhweba efanelana nawe.
Izicwangciso ze-Forex zorhwebo zingenza imali kwi-Forex.
Ngaloo nto engqondweni, le website ye-Forex inekhulu Izicwangciso zezorhwebo zangaphambili kuzo zonke iintlobo zabathengisi kubaqalayo kubahwebi abaphambili.
forex Scalping Isicwangciso esilungiselelwe ukusebenza kumaxesha amaninzi aphantsi, oko kukuthi i-1-Minute kunye nexesha le-5-Minute time, iphambili yokukhangela isicwangciso sokurhweba. Lolu hlobo lwesicwangciso se-Forex yorhwebo lusetyenziswe ukutshintshela imarike yeenzuzo ezincinci kuwo wonke urhwebo olufakelwe, umzekelo i-5 pips, i-10 pips okanye mhlawumbi i-15 pips inzuzo. Yintoni esi si cwangciso kukuba iphendulela ezo zorhwebo kwiiseseshoni zorhweba, ngaloo ndlela zivumela ukuzuza okukhulu xa zongezwa. Nalu uluhlu lwe iinkqubo zokupasa kule ndawo:
I-Forex Doske Scalping System
I-Perk Scalping Trading System
I-Forex XXL Super Scalping Trading System
I-Forex Stochastic ye-MTF Scalping Strategy
I-Forex Super MA RSI Scalping Strategy
I-Forex CCI iStretrend Scalping Strategy
Yintoni i-Forex Scalping?
I-Forex scalping yindlela yokuhweba yosuku apho umthengisi we-Forex enza ishishini kwaye aphume ngaphandle kwemizuzu okanye imizuzwana kwezinye iimeko. Ngoko ngokubalulekileyo, xa unomthengisi we-scalp forex, ungakhange ujonge iithagethi ezinkulu zenzuzo, ufuna iinjongo ezincinci zentengiso nganye njenge-5 pips, i-1o pips okanye i-15 pips. Kwaye uzama ukuthabatha amaninzi kwiiseseshoni zeshishini kunye neenjongo ezincinci zentengo. Ngoko yiyiphi inqaku leNgqungquthela ye-Forex ekhawuleza ngoko? Ewe, apha 'into: injongo ye-FX scalper kukuba wenze imisebenzi eminingi kwiiseshoni zorhweba kunye nethemba lokuba ekugqibeleni, zonke ezo ntlawulo ezincinci ziza kwandisa kwaye zigqithise ilahleko zokurhweba ezenziwe (kunye nokunyamekela ukusasaza iindleko shishini). Abaninzi abathengisi be-Forex abayithandi i-Forex scalping kuba ayiboni nantoni ekuzuzeni inzuzo encinci kunye nokubandakanyeka kule hlobo lokunyanzeliswa kwengcinezelo. Kodwa into ehlekisayo kukuba ihagi baninzi abathengisi abafana ne-Forex scalping. Ukuba unomdla, le website ye-forex nayo inezicwangciso zokuqhawula phambili ongayihlola kwaye uzame ukuba uyayithanda ngokuchofoza Apha.
Iikhokhthi zeeNkcazo zeeNkcazo zeNkcazo zeMali
Iindaba zokurhweba zinokuba zinzuzo kwaye zingozi kakhulu. Ukuba awukwazi ukuba wenzeni, musa ukuthengisa iindaba. Unokusula i-akhawunti yakho yorhwebo phakathi kwemizuzwana embalwa ukuya kumzuzu kuba ixabiso lingashenxiswa kuwe ngokukhawuleza uza kubanjwa. Kodwa ukuba ungasebenzisi i-Forex izicwangciso zorhwebo zorhwebo kwaye ke le ntsuku, ukulungelelanisa imihla ngemihla ngaphambi kokuba uthengise izinto eziphambili zokukhutshwa kweendaba zoqoqosho ezicwangcisiweyo ukuba ziphume kwaye zigqibe isigqibo sokuba ulinde ukuba iindaba zikhutshwe uze udibanise okanye nje ulinde olunye usuku.
(Isisiseko) Elula Iinkqubo zokuThengiswa kweeNkcazo zabaQala
Ukuba uqalayo, ukuba neqhinga elide elinokuqhelana neli-forex lokuthengisa liya kudibanisa ukuphuma kwakho. Thatha ixesha lakho! Oko okufunayo kukuba uqale ngeendlela ezisisiseko zokurhweba ze-Forex kwaye usebenze indlela yakho ukusuka apho. Ezi zinto zilula kakhulu izicwangciso zokuthengisa zangaphambili. Ukuba Isiseko soshishino lwe-Forex akuthethi ukuba baya kuba yinkqubo yokurhweba inzuzo. Lula apha lithetha ukuba imithetho yokurhweba yezicwangciso ze-Forex zorhwebo zilula ukuqonda nokuzifeza xa uthengisa. Akukho zimo ezininzi okanye imigaqo yokudibanisa. Yingakho ezi zifanelekileyo izicwangciso zokuhweba zangaphambili zokuqala. Ezi ngokwenene zilula iinkqubo zokurhweba ze-forex ezifanelekileyo kubaqalayo abaqala ukuthengisa i-forex. Ukuba lula akuthethi ukuba ezi zicwangciso ze-forex azizuzi. Njengoko kunjalo, iinkqubo ezilula zokurhweba ze-forex zilula ukuyisebenzisa kwaye zinokuba luncedo kakhulu. Emva kokuba ufumana uxhaso lwalo, unokuqala ukuphuhlisa iinkqubo zakho zokurhweba ngaphambili okanye uqhubele phambili kwiinkqubo zokurhweba phambili ze-forex kunye neenkqubo zentengo ye-forex. Ukuba ungumthengisi wokuqala we-forex, ngokwenene awufuni ukudibanisa kakhulu kunye nazo zonke ezinye izinto ... nje thola inkqubo ye-forex elula yokurhweba kunye ne-demo ithengise ixesha elide. Oko uza kufumanisa kukuba iinkqubo zokurhweba ze-forex ezona zilula ziyakwenza imali. Fumana, yinyamekele kwaye uzame ukwenza ukuba isebenzele ngokubambelela kwimithetho yayo yokurhweba ngokulawulwa kwemeko efanelekileyo yokuthengisa. Price Action Ukuthengiswa kwexabiso lentengo kukurhweba nje ukuhlalutya kwezobugcisa usebenzisa ukusetyenziswa kwezibane zezibane, iipatheni zetshathi, inkxaso kunye namanqanaba okumelana nokwenza amagosa. Ukuze ube yintengo yokuthengisa intsebenzo, kufuneka ube nokuqonda okuqinileyo kwindlela intsebenzo yexabiso elithathwa ngayo kunye nendlela yokuyithengisa ngexesha langempela. Nalu uluhlu lwe inkqubo zezenzo zentengo kule ndawo:
I-Forex Price Action Isicwangciso sokuThengiswa kweMakhandlela
I-Forex Price Action Isicwangciso soShishino lokuShathisa iNkxaso
Isicwangciso seShishini sokuThengisa iSahluko sokuQala esiPhambili
I-Forex EMAS I-Action Action Scalping Strategy
Ixabiso leNkcazo yeNzuzo yeNqanaba leScalping Strategy
I-Forex Price Action Channel yeCalpping Strategy
I-Fractal Forex Action Action Action PPR Indicator
Izinto ezibalulekileyo zeCandelo loRhwebo lweeNkcazo
Iyiphi isicwangciso se-Forex yorhwebo (inkqubo)? Isicwangciso soshishino sogqirha sisisethi semithetho esichazela ukuba uthenge okanye uthengise xa iimeko ezithile zeemarike zidibene ukuze zenze inzuzo. Nayiphi na isicwangciso sokuhweba sogqirha kufuneka sibe nale nqobo ye-4 kodwa izinto eziyisiseko:
imeko (imeko) ekufuneka ikukhombise ukuthenga okanye ukuthengisa.
apho ubeka khona umyalelo wokulahleka kwakho,
apho ubeka khona uthabathe inzuzo
kwaye inkqubo kufuneka ibe nemithetho malunga nendlela yokulawula urhwebo.
Leyo yintsikelelo yeso sicwangciso soshishino sokuphambili. Ukuba inkqubo yokurhweba engenayo nayiphi na yale miqobo, uya kushiywa udidekile ekuphunyezweni. Ukubeka ngokulula, i-market forex ingatsho ukuthi ixakeke. Ngoko ukuba ube nomyalelo kwimakethi ekhukisayo, kufuneka ube nemithetho.
Kukho ninzi kakhulu Izixhobo zenkxaso yeengaphambili kule website ye-Forex equka:
Amanqwanqwa okuThengiswa kweeNkcazo ezisebenza
Wonke umthengisi we-forex uhlukile ... into oyithandayo akuyona into endiyithandayo. Yintoni ocinga ukuba yiyona ndlela iphambili ye-Forex yokurhweba mna ayiyi kuba yinto efanayo. Lo mbuzo ushiywe kumthengisi ngamnye we-Forex. Kufuneka ufumane isicwangciso sokurhweba kwi-Forex ehambelana nobuntu bakho boshishino kwaye xa uyenzayo ... ke oko kuya kuba yindlela yakho ephambili yokuhweba ngaphambili (kwimbono yam). Ngoko ke, ukuba ufuna Izicwangciso zezorhwebo zangaphambili, qonda ukuba enye inkqubo ayikwazi ukusebenza kuwo wonke. Ndiyakuthanda ukuthengiswa kwamanani entengo kodwa ungathanda ukusebenzisa izalathisi kwinkqubo yakho yokurhweba. Udinga ukuphanda kwaye uvavanye kwaye ufumanise uluphi uhlobo lwezicwangciso ze-forex zokurhweba kunye neenkqubo ezisebenzela wena ngenxa yokuba yonke into iyahluke. Ukuba uthanda ukuhambisa amaqhinga okuhweba ama-forex, kukho ezininzi kwiziko. Ukuba uthanda ukucwangcisa izicwangciso ze-Forex zorhwebo, zilapha. Ukuba uthanda amacebo okuhweba weendaba, zilapha. Ukuba uthanda amacebo okurhweba ngosuku kunye neenkqubo, zilapha apha. Ukuba uthanda ukuguqula izicwangciso zokurhweba kunye nenkqubo, ezininzi izicwangciso apha ziza kuguqula iinkqubo zokurhweba. Konke okufuneka uyenze kukufumanisa into oyithandayo kwaye wenze eso sicwangciso soshishino lwe-Forex kuwe. Okanye ukuba awufumani inkqubo ye-Forex oyithandayo kodwa kukho enye "uhlobo oluthandayo" kodwa alunakulungelelani ... ke kutheni ungayiguquli? Kutheni ungayitshintshi ngokudibanisa iindlela ezimbalwa zokurhweba okanye iingcamango ezivela "kule nkqubo yokurhweba" kwaye "inkqubo yokurhweba" kwaye wenze inkqubo yokurhweba unelisekile ngayo? Akukho mntu uya kukumisa. Ngoku, vumela uthi emva kokuba ufumene isicwangciso sakho se-Forex oyithandayo ... wenza ntoni ngokulandelayo? Kulungile, vula i-akhawunti yezobudlelwane be-demo kunye ne-Forex broker kwaye uvavanye inkqubo ukuze ubone indlela isebenza ngayo kwiimeko zangempela zemarike eziphilayo. Leyo yodwa indlela oyazi ngayo indlela inkqubo yokurhweba phambili kuyosebenza ngayo. Zonke izicwangciso zokurhweba kunye neenkqubo zinokubonakala zihle kule ndawo kodwa ukuba uthanda kwindlela yokurhweba, ufuna ngokwenene ukuyivavanya. Emva koko xa unelisekile, ngoko uqala ukurhweba ngemali yangempela. Yilapho ukuzonwabisa okuqala ... ukurhweba ngemali ephilayo. Zingaphi izicwangciso zezorhwebo ozifunayo? Ukuba ukhetha ukuthengisa kuphela uhlobo olulodwa lokusekwa kwezorhwebo uze ufune kuphela kwi-forex yorhwebo inkqubo. Kodwa ukuba uthanda ukuthengisa iintlobo ezahlukeneyo zeemarike ngoko kuba kukho iinkqubo ezininzi ezinobungqina bokurhweba phambili kwiimeko zeemarike ezahlukeneyo kubalulekile. U mzekelo:
ukuba i-marhwebo isendaweni, ngoko uya kusebenzisa inkqubo yokurhweba
ukuba imarike inokudibanisa okanye kuluhlu, kufuneka usebenzise inkqubo yokurhweba
ukuba imarike iya kwiinkxaso ezinkulu okanye amanqanaba okumelana, unokufuneka utshintshele ekusebenziseni inkxaso nenkqubo yokurhweba.
Ngoko ngokuqinisekileyo kuya kumthengisi we forex ukugqiba. Ukuba ngaba ngabaqalayo bathengisi be-forex, ndincoma ukuba ukhethe kuphela ukuthengiswa kwe-forex eyodwa kwaye unamathele kuyo.
Ukurhweba ngokuShishino kunye nokuSasa kweSuku?
Wonke umrhwebi we forex uhlukile. Abanye bathanda ukurhweba ixesha elifutshane kunye nokugcina abahwebi babo bavule ixesha elifutshane elibhekisela kwindlela yokuhweba kwimihla edlalwa apha. Kodwa ke kukho abathengisi bokuqala abathengisa abahwebi ... Abathengisi be-Swing ngabo ba bathengisi abathatha i-trade kwaye banesidanga esikhulu ukuya kwexesha elide. Oku kuthetha ukuba urhwebo luya kuvulwa kwaye luthatha usuku ukuya kwiveki okanye kwinyanga ngaphambi kokuba kuvulwe urhwebo. Abathengisi be-Swing bafuna ukulinda urhwebo ukudlala ... kuthatha ixesha elingakanani kuxhomekeke kwizenzo zamanani kunye nokunyuka kweemarike ngokwenene. Inzuzo yokuguqula ukuthengiswa ngoko ke kukuba, zonke ixabiso elincinci lokuguquguquka kwixesha elincinci (okuyilo lwazi lomthengisi wosuku) lugcinwa kwaye ingqwalasela enkulu yesikhathi eside iqhutywe malunga noshishino ngalunye olubekwe. I-advantage ye-swing yorhwebo ke yiyo:
Amashishini abanjelwe iintsuku, iiveki kunye neenyanga zithetha inzuzo eninzi
Ingxolo encinci yentengo ayikho nto
Amashishini afakelwa ukungena kwiingongoma zokungena, ezona ziimeko ezininzi, zibonisa umngcipheko ophantsi, iingongoma eziphezulu zokungena kwezohwebo.
Okukuphela kwintlekele enkulu yokuguqula i-swing yorhwebo ngamanye amaxesha kufuneka ulondoloze urhwebo nakwi-up and down infings of price njengoko luya kwi-target target. Iintlobo zorhwebo losuku zi:
inzuzo okanye ilahleko efunyenwe ngexesha elifutshane emini.
Amathuba amaninzi okurhweba anokufumaneka ngexesha lomhla.
Iingxaki zokuthengiswa kwamalanga zi:
inzuzo encinane kwintengiso nganye
ezinokuthi zenze i-trade-over
Uxinzelelo oluphezulu kunye neendawo zokurhweba ezithintekayo kwaye kufuneka ukuba uhlale uqaphele ukukhangela amashadi akho okurhweba.
I-Scalping nayo ifom e mfutshane kakhulu yorhweba lomhla ... kuthatha imizuzu okanye imizuzwana ukuvula ingavimbela urhwebo.
Iiyure ezigqithiseleyo kwiRhwebo yeHlabathi?
Iingcamango ziyahluka kodwa into enye iqinisekile ... kulula ngakumbi ukwenza imali yokuthengisa i-market forex xa imarike ye-fx ine-volatility and momentum. Kwaye ngoko xa kufikelele kuloo nto, abaninzi abathengisi be-forex bathanda ukuthengisa urhwebo lwe-forex ngexesha leSondon Session kunye neNew Your Session. Iiseshoni ze-forex yaseLondon apho i-volume enkulu yokuthengiselana kwangaphambili eyenziwa yansuku zonke elandelwayo ngokulandela iSeshya Yakho entsha. Kwiseshoni ye-trade forex yase-Asia, i-oftentimes ishicilelwe yimilinganiselo encinci ngemini. Eyona nto ingcono ngombono wam ukuthengisa ubuxhakaxhaka ngexesha leeholide laseLondon okanye ngexesha leNew Your Forex trading session.
yethu Kunconywe i-Forex i-MT4 Indicator kwiqoqo lethu:
iikhonkco zee-bandling indicators
zixhobo ze cci
izixhobo zokuthengisa ngosuku
iziphumo zokuhamba eziphakathi
Eyona Mibini Yeebhanki Zokuthengisa?
Ukukhetha ibini leemali ukuthengisa kubaluleke kakhulu. Nasi isizathu:
ezinye iibhanki zemali azihambelani kakuhle
ezinye iibhanki zemali zihamba kakuhle kakuhle kwixesha elithile ngexesha lomhla, umzekelo, eLondon kunye neseshoni yokuthengisa yakho entsha.
ezinye iibhanki zemali zikhulu kakhulu zandale kwii-3-5 iipips kunye nabanye abaxhasi be-forex kwaye xa uthengisa isivumelwano esisisigxina, i-$ 10- $ 50 ukulahlekelwa kwangoko emva kokuba ungene urhwebo kunye nexabiso kufuneka lihambe ngoku ulwalathiso lwakho loorhwebo ukwenzela ukuba olo shishini lwenzeke.
ezinye iibhanki zemali zinezinto ezintle kakhulu ezinokuthi zithatha ukuthambekela kwi-spike kwaye ukuba ukulahleka kwakho kokuyeka kusondele kakhulu, uya kupheliswa
Iinqununu zethu eziphakanyisiweyo ze-Forex:
Kutheni uhlalutyo lobugcisa lusebenza kakuhle kwi-Market Forex
Kutheni i-Forex i-Ideal Investment Idea kunamaSitishi okanye iimpahla
Yiyiphi indlela eyahlukileyo yokuThengisa iiLots Vs. Ubukhulu obukhulu beLots kwi-Forex
Ukuqonda i-Forex yokuThengisa uRhwebo
Ukuthengiswa kobuchule kwi-Market Forex
I-Pros ne-Cons, ye-Trading ye-Akhawunti ye-Forex Trading Demonstration
I-Market Forex kunye neMpumelelo yayo
I-Elliott Wave Theory In Trading Forex
Inkxaso noKhuselo kwiMakethe ye-Forex
I-Savvy Tactics yokunciphisa i-Forex Forex Loss
Iingenelo zeSetyk Strategies and Techniques
Iimpawu zePivot kwi-Forex: Imephu ye-Frame Frame
Ukunyuka kweeNqanaba kwiMakethe ye-Forex
Ulawulo lweMali kunye nokuThengiswa kweeNkcazo
ULeonardo Fibonacci noRhwebo lweeNkqantosi
Ingcwele yeGrail yoThengiso lweeNkcazo?
The Igrail engcwele ye-Forex yokurhweba yimali yokulawula imali. Maxa wambi ubizwa ngokuba nguLawulo loLawulo lweengozi. Ufumene lo ngokufanelekileyo ngokuqeqesha kwaye wenze into efanelekileyo kunye noko uza kukubona oko yinto nje yexesha ngaphambi kokuba uqale ukwenza ukuthengwa kwemali ebalulekileyo. Yintoni ephazamisa izigidi ze-akhawunti ze-forex zokurhweba nguMlawuli weMali. Ngoko akunangqiqo ukukhula ngokwakho ekufumaneni oku kulungile? Uyabona, akukho qhinga lokuthengisa eliza kukunika i-100% yezinga lokuphumelela. Akukho. Xa kuthe kwafakwa urhwebo, isiphumo ofunayo asiqinisekanga ngenxa yokuba awukwazi ukulawula intengo yemarike kwaye apho iya kuhamba khona! Unesihe kwimimandla yemarike yokubonelela kunye nokuthengwa kwemfuno kunye nabathengisi. Kodwa oko ungakulawula yi-RISK. Yiloo nto kuphela enokulawula ngokupheleleyo kwizorhwebo ... umngcipheko wakho wokurhweba. Unquma ukuba unani le-akhawunti yakho obeka ingozi kwi-yorhwebo.
Yiba Nenzuzo kuMthengisi we-Forex
Abathengisi abaninzi benza kwaye balahlekelwa imali eninzi yokurhweba. Kutheni ngenxa yokuba uvakalelo lomntu lubandakanyeka ... ukuhaha noloyiko luya kudlala. Xa imali yakho yangempela isemgceni, uya kuthi wenze izinto ongeke uyenze ngelixa udibaniso lwentengiso. Isihendo sokurhweba kakhulu kwaye senze imali eninzi "ngoku kwangoku" ngumbulali oyintloko kakhulu wee-akhawunti zokuthengisa. Konke kuhla ukulawula nokulawula umngcipheko wakho. Ukungaphumeleli koku kwaye awuyi kuhlala ixesha elide kwi-forex kwi-intanethi.
Ngaba unokwenza imali yokurhweba Forex?
Ewe kunye No. Le nto ayimpendulo emangalisayo. Unako ukwenza imali. Kwakhona unokulahlekelwa yimali eninzi. Imfihlelo yokwenza imali kwi-forex yokurhweba ilawula ingozi yakho yorhwebo kwaye ufumana isicwangciso sokurhweba esilungelelene nawe. Yonke into ayinanto. Ukuba unokulawula imvakalelo yakho kwaye uphathe ingozi yakho yokurhweba, uya kwenza kakuhle. Ewe, ukuba ulawula ingozi yakho yorhwebo kwaye ube neebhola zensimbi ... Ngokwenene, unokuba luncedo xa uphelisa ezo zinto ezonakalisa ukuhweba kwakho ngaphambili:
ayilandelanga imithetho ye-forex yakho yokuthengisa
ayilandelanga isicwangciso sakho sokulawula umngcipheko owawunayo.
ungalindeli i-setups ezifanelekileyo zokuthengisa ngaphambi kokuba uthathe urhwebo ngenxa yokuba "ukukhawuleza" ukuthatha urhwebo
Ezi zinto ziyakwenza ube ngumthengisi we-Forex engenakunceda kwaye unokulahlekelwa yimali eninzi xa ungalawulwa. Kukho ilizwi "Ndiyibonile intshaba ... kunye nayo yam." Oku kuyinyaniso kakhulu kwi-Forex yorhwebo. Uyilo lakho elibi kakhulu xa lifika kwi-Forex yorhwebo. Ukuba ungumthengisi omtsha, uya kubona oku kwaye ucinge ukuba ndiqamba amanga ... Kodwa linda uze ude uthengise imali yangempela kwithuba elithile kwaye uza kuqonda into endikutshoyo yinyaniso. Unomngcipheko omkhulu kumashishini? Kukho izikolo ezininzi zokucinga malunga nokuba umngcipheko omnye unokubeka umngcipheko kwintengiso nganye. Kodwa khumbula oku: ukuba unobungozi obuninzi kwi-akhawunti yakho kworhwebo olulodwa, akuyi kuthatha ixesha elide ngaphambi kokuba unokususa i-akhawunti yakho ye-forex yezohwebo kodwa ngakolunye uhlangothi, unokwenza imali eninzi ukuba urhwebo luhamba ngokufanelekileyo. Kodwa uthengisa phambili kwixesha elide, lenza ingqiqo ngokugqibeleleyo ipesenti ye-akhawunti yakho yorhwebo kwintengiso nganye. Isizathu sisilula: eso sasiza kuthatha ezininzi kangaka ukulahlekelwa imifudlana yokubethelela i-akhawunti yakho ye-forex yorhwebo. Ngoko yintoni engcono kakhulu ingozi? Ndiya kuthi kumathele kwi-1-2% ye-akhawunti yakho kwintengiso nganye. Unokwenyuka unyuke ngo-5% mngcipheko ngezohwebo. Kodwa khumbula, nge-5% yobungozi kwintengiso nganye, konke kuya kuthatha i-20 ukulandelwa kwemisebenzi kwaye i-akhawunti yakho iya kupheliswa. Okona usengozini yokulahlekelwa kwakho okanye ungenza ngaphezulu. Udlala lo mdlalo wokulawula umngcipheko kwaye unokwenza itani ye-trade forex.
Iingcebiso Zethu Ngeengcebiso ze-Forex:
Izinto Omele Uzazi Ngaphambi Kokuvula I-Akhawunti ye-Forex
Izinto Omele uziqwalasele Ngaphambi kokuba Utyalole kwi-Forex
I-Market Forex: Ukuthengiswa kweDivergence
Enye Indlela Efanelekileyo Yokuphepha Imihla Emibi Kwi-Intanethi ye-Forex Currency Trading
Yenza iMali ye-Forex Trading ngokusebenzisa i-Volatility
Funda ukuThengiswa kwexesha elide-Indlela yokudala iNgeniso nge-Forex Trading Part Time From Home
Indlela yokusebenzisa umlinganiselo wokufumana iziphumo eziphezulu ngexesha elide
Indlela Yokufunda Iingqapheli Zexesha Elide: Izinto ze-5 Okumele Uzazi
Indlela yokukhetha i-Good Forex Broker
Indlela yokuLawula ukulahlekelwa kwakho kwi-Forex
Indlela Yokufumana Uninzi Ngaphandle Kwexesha Lakho Lokuthengisa Imali
Indlela yokukhetha i-smart Stop Loss kwi-Forex Trading
Umsebenzi wokuThengiswa kweeNkcazo ze-Forex?
Iingcebiso Ezinkulu Zenzuzo Ukuthengiswa Kwexesha leNkcazo
UkuThengiswa kweeNkqantosi, Ziziphi iiyure kufuneka ndilungele ukuThengisa?
Landa iiMpawu zeMT4 ezingcono kakhulu
I-Forex JJN Fibo Indicator
I-Forex JJN Fibo ... [Funda ngokugqithisileyo...]
Isalathisi seKreve yeBrax Bezier
I-Forex Basis Bezier Curve ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Fractal Forex Custom MD i-Indicator Indicator
I-Fractal Forex Custom MD Izaziso ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex EMA OsMA Indicator
I-Forex EMA OsMA ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex Angle AZad Css Indicator
I-Angle Forex AZad Css ... [Funda ngokugqithisileyo...]
Abadala be-Forex Indicator Zone Zone
Abadala be-Forex Zone Safe ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex CCI DR Bob Indicator
I-Forex CCI DR Bob ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex MACD Crazy Pips Indicator
I-Forex MACD Crazy Pips ... [Funda ngokugqithisileyo...]
Iikhompyutha zeeNkqubo zokuThengisa iiHlabathi
Isisombululo seNkcazo iMpawu
Isinyathelo se-Forex I-Indicator Forex ... [Funda ngokugqithisileyo...]
Ixabiso lentengo yePrescent Percent Indicator
Ixabiso lentengo yepesenti ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex Ultra Secret Trading System
Ukuthengiswa kweSibrari Ultra Forex ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex Linear Regression Slope V1 Indicator
I-Forex Linear Regress Slope ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-ATM ye-Forex Ixabiso leMarike eNyanisekileyo
I-ATM ye-Forex Intengo yeNtengiso ethe tye ... [Funda ngokugqithisileyo...]
Imibala emithathu ye-Forex Indicator
Imibala emithathu ye-Forex ... [Funda ngokugqithisileyo...]
Isalathisi sokuThengiswa koThengiso lweFractal Forex
Amanqaku eFractal Suppandres Forex ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex AC AO Isicwangciso sokuThengisa iStochastic
I-Forex AC AO I-Stochastic Trading ... [Funda ngokugqithisileyo...]
Iikhompyutheni zokuPhumela ngeFree Free Forex
Isicwangciso seNkqubo yokuThuthuka kweNkcazo yeSasa
UkuHlahla kweMpahla yokuHlaba kweMvula ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex ye-Demark Indlela yokuPhuhlisa isicwangciso soRhwebo
I-Forex Demark Indlela yokuPhula ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex MA-Dinapoli yokuShishini lokuPhuhlisa iShishini
I-Forex MA Dinapoli Breakout ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex yeSicwangciso seNtengiso yokuPhulwa kweSakhiwo seNkcazo yaseMandulo
Ukuphumla kweNtshukumo yeThupha yaseMandulo ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex ye-Early Bird Breakout Strategy
Ukuqhekeka kweNtshonalanga yokuqala yeenyoni ... [Funda ngokugqithisileyo...]
I-Forex Super Zones Isicwangciso soRhwebo lokuPhuhlisa
Ukuphumla kweZakhiwo eziPhambili ze-Forex ... [Funda ngokugqithisileyo...]
uphawu oluphambili isalathisi isalathisi sokulumkisa Isalathisi utolo isr uphawu lwebha uphawu olungcono lweMM4 izikhombisi zee-bandlinger bathenge ithorensi yokuthengisa isalathisi sekhandlela cci indicator isalathisi sesiteshi umqondiso wesiphambano uphawu lwesithethe uphawu lwedeshibhodi isalathisi somhla lathisi lathiso uphawu lwenkcazo uphawu lwe fibonacci isalathisi isibonakaliso sephambili fx uphawu nesikhombisi seMOT4 Isalathisi ngumbala osetyenziselwa ukuzoba Uphawu lweChimoku lathisi lwazi uphawu lwezinga umgca Isalathisi macd Isibonisi se 4 isibonakaliso sokukhawuleza isibonakaliso somyinge ophakathi uphawu lweMOT4 umqondiso we-mtf uphawu lwe oscillator isalathisi seengongoma isalathisi samanani isalathisi sokuguqula rsi isalathing uphawu lwembonakalo uphawu lwe stochastic uphawu oluphezulu isalathisi sendlela uphawu lwevolumu
Khuphela i-Free Forex Kaufman Yithengisa I-Indicator Line!
Landa mahala I-Forex Kaufman Yithengisa I-Indicator Line!